Khin Ma Ma Myo's Blog: Health and Wealth
National Policy Sovereignty
From 92 years old
A River (part-4)
A River (part-3)
A River (part-2)
A River (part-1)
Warning to Dictators!
Writing essays (part-2)
concerning with Dialogue
Economic and Social indicators and Development : C...
Join Golden Colour Revolution
Gambari's second visit
Writing essays (part-1)
(၂၀၀၁) ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) ကနေ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဓနကြွယ်ဝမှုကြားမှာ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းအကျိုးတရား (causal effects)များ ရှိတယ်ဆိုတာကို အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျန်းမာရေးဟာ လာဘ်ကြီးတပါးဆိုသလိုပဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သလို၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကနေတဆင့်လဲ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းတရားနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အနေနဲ့ အမှီသဟဲ ပြုနေကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးနေတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကို ဘယ်လိုမှ တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်သလို အကျိုးဆက်အဖြစ် ပိုမိုဆိုးဝါးတဲ့ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုသာ ဦးတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Individual level အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ၀င်ငွေများပြားမှုဟာ အစားအစာပြည့်စုံမှု၊ နေအိမ်တိုက်တာကောင်းမွန်မှုနဲ့ ရောဂါမဖြစ်ခင် ကြိုတင်တားဆီးနိုင်မှုအပါအ၀င် preventive public health measures တွေကို ပိုမိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် health and wealth အပြင် အခြား third factors တွေ ဖြစ်တဲ့ education လို အခန်းကဏ္ဍတွေအပေါ်မှာလဲ များစွာသော အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။
(၂၀၀၁) ခုနှစ်မှာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒပညာရှင် Bhargova ဆိုသူက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှု၊ ၀င်ငွေများပြားမှုနဲ့ ဓနကြွယ်ဝတိုးတက်မှုတွေကြားက ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေအရ ကျန်းမာသော လုပ်သားများဟာ တခြားလုပ်သားများထက်စာရင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ nutrition ဆိုင်ရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများအပြားလုပ်ပေးရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ဓနကြွယ်ဝမှုကြားက နောက်တခုဆက်နွယ်မှုကတော့ ပညာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ကလေးသူငယ်တွေဟာ ကျောင်းတက်မှန်တဲ့အတွက် cognitive development ဖြစ်လာပြီး၊ Life expectancy လဲတက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုလာနိုင်ပါတယ်။
အရှင်းလင်းဆုံးအခြေအနေကို ဥပမာပေးရရင် အာရှအရှေ့ပိုင်းကို ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်က ဒီဒေသရဲ့ Life expectancy ဟာ (၃၉)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ (၁၉၉၀) ခုနှစ်ကျတော့ (၆၇)နှစ်ကို တိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ working age people (15-64) အရေအတွက်နဲ့ မှီခိုလူဦးရေ (below 15 & over 65) ကြားက အချိုးဟာလဲ ၁.၃ ကနေ ၂.၁ ကို တိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို Labor supply တက်လာမှုဟာ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုလဲ တက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် retirement saving ကလဲ longevity နဲ့အတူ တက်လာခဲ့ပါတယ်။ အာရှအရှေ့ပိုင်းရဲ့ မယုံကြည်စရာကောင်းလောက်တဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမှာ ဒီလို factor inputs များက အဓိက နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍရဲ့ ဓနကြွယ်ဝမှု အပေါ်မှာ သက်ရောက်နိုင်တဲ့ impact ကို အာဖရိကတိုက် HIV/AIDS ပြဿနာနဲ့ ဥပမာပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ (၁၉၆၀) ခုနှစ်မှာ အာဖရိကတိုက်ရဲ့ Life expectancy က ၄၀နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၉၀)ခုနှစ်မှာ ၅၀ ကို တိုးသွားခဲ့ပေမယ့် ၂၀၀၁ခုနှစ်လဲရောက်ရော (၄၆)နှစ်ကို ပြန်ကျသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ အဖြေကရှင်းပါတယ်။ HIV/AIDS ကြောင့်ပါ။ တကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ရောဂါပိုး ဖြစ်ပေမယ့် ရောဂါကို လျစ်လျူရှုမှု၊ ကွန်ဒုံးသုံးစွဲမှုကို resist လုပ်မှု၊ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများကို discriminate လုပ်မှုတွေအပြင် ကြီးစွာသော ဆေးကုသစရိတ်တွေ ထပ်လောင်းလိုက်တဲ့အခါ အာဖရိကတိုက်ဟာ ဒီရောဂါဆိုးရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကြီးမားစွာ ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။
ဒီရောဂါဆိုးရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကလဲ အရမ်းကြီးမားလှပါတယ်။ တခြားရောဂါတွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က တခြားရောဂါအများအပြားက အသက်အရွယ်ကြီးသူများနဲ့ ကလေးသူငယ်များကိုသာ ပိုမိုထိခိုက်မှု ရှိစေပြီး၊ ဒီရောဂါကျတော့ working age တွေကို ပိုမိုထိခိုက်စေတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒီရောဂါက all sectors of economy ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ တခြား malaria တို့လို rural areas တွေကို ပိုမို ထိခိုက်စေတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဒီအတွက်ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတွေ ကျဆင်းလာတဲ့အပြင် saving rates တွေကလဲကျလာ၊ orphans လေးတွေကို စောင့်ရှောက်ရတဲ့စရိတ်ကလဲ ပိုမိုကြီးမားလာပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ တိုင်းပြည်တခုလုံးရဲ့ economic infrastructure ကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်လာစေပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးအာဖရိကနိုင်ငံအများစုဟာ palliative care နဲ့ opportunistic infections တွေကို treatment လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ Benin မှာဆိုရင် retroviral drug အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဟာ အရမ်းကြီးမားပြီး တနှစ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဟာ တနှစ်ဝင်ငွေထက် (၆)ဆ ကြီးမားပါတယ်။
အခုဖော်ပြတဲ့ ဥပမာလေးတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ဓနကြွယ်ဝမှု၊ ၀င်ငွေတိုးတက်မှု၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကြားက ဆက်စပ်မှုတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Human capital investment ဟာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ အရေးကြီးသော သော့ချက်ဖြစ်လာတဲ့ (၂၁)ရာစုကြီးမှာ Human Resources Development ရဲ့ အဓိကအချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ နိုင်ငံတိုင်း ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့် ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သင့်ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ “Health for All” ဆိုတဲ့ Goal ကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ ပေါ်လစီများအကြောင်းကို နောက်ပိုင်းဆောင်းပါးများမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၃၊၁၁၊ ၂၀၀၇)
Bhargova, A., Jamisn, D.Y., Lau, J.L. and Murray, C.J.L. (2001) Modeling the effects of health on economic growth, Journal of Health Economics, 20, 423-440
World Health Organization, Commission on Macroeconomics & Health (2001) Macroeconomics & Health: Investing in Health for Economic Development, Geneva: WHO
Fox, M.P., Rosen, S., MacLeod, W.B., Wasunna, M., Bii, M, Foglia, G. and Simon, J.L. (2004) The impact of HIV/AIDS on labor productivity in Kenya, Tropical Medicine and International Health, 9(3), 318-324